Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. मेची भन्सारमा अवैध असुली, भारतीय दैनिक ठगिदैं – Emountain TV
मेची भन्सारमा अवैध असुली, भारतीय दैनिक ठगिदैं
झापा, २५ भदौ । मेची भन्सारका कर्मचारीले भारतीय सवारी साधनबाट सुविधा काट्ने नाममा अवैध असुली गर्ने गरेको पाइएको छ । भारतबाट नेपाल आउने मोटरसाइकल तथा ४ चक्के सवारीलाई नजिकैको बजारसम्म पुग्न भन्सार पत्र काट्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यस बाहेकका अन्य क्षेत्रमा जान भने दैनिक पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर हरेक दिन नजिकैका बजारसम्म चल्ने सवारीबाट समेत भन्सारका कर्मचारीले अवैध असुली गर्दै आएका पाइएको हो । मेची भन्सारका कर्मचारीले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नम्वरका व्यापारिक प्रयोजनका दुध बोक्ने तथा चार पाङ्ग्रे साना सवारी र निजी मोटरसाइकलबाट कागज मिलाउने भन्दै प्रति सवारी २० रुपैयाँदेखि भारतीय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
मेची भन्सारका कर्मचारीले बिहान ६ बजेदेखि बेलुकासम्म सयौँ मोटरसाइकल तथा साना सवारीबाट हजारौँ रकम असुल्ने गरेका छन् । सुविधा कागजमा कुनै पनि रकम उल्लेख गरिएको हुँदैन । नजिकैका बजार सीमा क्षेत्रबाट ५ किलो मिटरसम्म निशुल्क सुविधा छ भन्ने सवारीधनीलाई खासै थाहा नभएको पाइएको छ । उनीहरुले बर्षौँदेखि मोटरसाइकलको कर भन्दै २० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।
यस बिषयमा सञ्चारकर्मी स्थलगत रिर्पाेटिङमा पुग्दा भन्सारका कर्मचारीहरु भागेका थिए । भन्सार सुविधा कसरी दिनु हुन्छ भनेर सोध्दा त्यहाँ खटिएका कर्मचारी लीला खनाल र श्याम सिंह कार्यालयबाटै भागेका थिए । कर्मचारीले बिहान ९ बजेसम्म २० वटा सवारी इन्ट्री गरेको फाइल देखाए । तर त्योभन्दा अघि नै अवैध पैसा असुलेर सयौँ सवारीले सुविधा पत्र लिइसकेका थिए । भन्सारले सुविधाको नाममा अवैध रकम उठाउनु उचित नभएको ट्राभल्स संघ झापाका अध्यक्ष निरकुमार कार्कीले बताउनु भयो ।
मेची भन्सारका कर्मचारीले सयौँ सवारीबाट यसरी हरेक दिन हजारौँ रकम असुल्दा समेत सम्बन्धित निकाय मेची भन्सार कार्यालय मौन छ । भन्सार कर्मचारीको गोजीमा जाने यो रकम असुली रोक्न सम्बन्धित निकायको पहल नै महत्वपुर्ण हुन्छ ।